भारतमा घट्दो क्रममा कोरोना संक्रमण:: Naya Nepal
२० असोज, काठमाडौं । भारतमा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को संक्रमण बिस्तारै घट्दो क्रममा देखिएको छ ।
भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयले मंगलबार दिएको जानकारीअनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा भारतमा कोरोनाका ६१ हजार नयाँ संक्रमित फेला परेका छन् । यससँथै भारतमा समग्र कोरोना संक्रमितको संख्या ६६ लाख ८५ हजार ८३ पुगेको छ ।
यद्यपि पछिल्लो ६ दिनमा भारतमा निरन्तर कोरोना नयाँ संक्रमित घट्न थालेका छन् । यसअघि सोमबार सार्वजनिक गरिएको तथ्यांकअनुसार त्यसअघिको २४ घण्टामा ७४ हजार ४४२ नयाँ संक्रमित फेला परेका थिए । त्यस्तै आइतबार यो संख्या ७९ हजारभन्दा बढी थियो ।
शुक्रबार ८६ हजारभन्दा धेरै कोरोना संक्रमित भेटिएका थिए । यसले भारतमा कोरोना संक्रमण निरन्तर घट्दो क्रममा रहेको देखिएको छ । अमेरिकापछि विश्वमा सबैभन्दा धेरै कोरोना संक्रमित भेटिएको भारतको लागि यो सुखद् संकेत हो । कोरोनाबाट सबैभन्दा प्रभावित अमेरिकामा ७४ लाख भन्दा धेरै कोरोना संक्रमित फेला परेका छन् ।
त्यस्तै मृत्यु हुनेको संख्यामा पनि पछिल्लो केही दिनमा कमी आएको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा भारतमा कोरोनाबाट ८८४ जनाको मृत्यु भएको छ । यससँगै भारतमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्यमा एक लाख तीन हजार ५६९ पुगेको छ । यसअघि अघिल्लो २४ घण्टामा ९०३ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
गत अक्टोबर १ मा भारतमा एकदिनमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या एक हजार १८१ थियो । त्यसयता निरन्तर यो संख्या घट्दो क्रममा देखिएको छ । भारतमा निको हुन बाँकी रहेको संक्रमितको संख्या पनि अहिले नौ लाख १९ हजार २३ मा झरेको छ ।
अमेरिकामा अहिलेसम्म कोरोनाबाट दुई लाख १० हजारभन्दा धेरैको मृत्यु भइसकेको छ भने ब्राजिलमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या एक लाख ४६ हजार नाघेको छ ।
निरन्तर छलफलमा स्वास्थ्यमन्त्री, के फेरि हुन्छ लकडाउन ?
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले कोभिड–१९ अस्पतालका निर्देशकसँग भर्चुअल माध्यमबाट छलफल गरेका छन् । कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गरिरहेका चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मीलगायतले भोगिरहेका समस्या, गरिरहेका नियमित काम र स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगको अपेक्षाका बारेमा उनले जानकारी लिएका थिए । सो अवसरमा मन्त्री ढकालले सबैको सहयोगले मात्र कोरोना भाइरस सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न सकिने भएकाले ठोस उपचार नदेखिएको अवस्थामा सावधानीपूर्ण जीवनशैलीका लागि सबैलाई प्रेरित गर्नुपर्ने बताए ।
नजिकै आइरहेको चाडपर्वमा हुने भीडभाडले कोभिड–१९ को जोखिम अझै बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको भन्दै उनले नागरिकको उपचारमा कुनै पनि कसर बाँकी नराख्न अस्पताल निर्देशकलाई निर्देशन दिए । उनले सरकारले स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव हुन नदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै बिरामी अस्पतालको गेटबाट फर्कनु नपर्नेगरी काम गर्न निर्देशन दिए । छलफलमा २५ जना अस्पतालका निर्देशकको सहभागिता थियो । उनहरूले कोभिड–१९ का कारण भोगिरहेका समस्या, अहिले गरिरहेका काम र स्वास्थ्य मन्त्रालयले तत्काल गरिदिनुपर्ने काम लगायतका विषयमा मन्त्रीसँग जिज्ञासा राखेका थिए । लकडाउनको सम्भावना ? मन्त्री ढकालले स्वास्थ्यविज्ञ, प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री र अन्य सरोकारवलाहरूसँग पनि नियमित रूपमा छलफल गरिरहेका छन् ।
पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना भाइरस तीव्र रुपमा फैलन थालेसँगै ‘पुनः लकडाउन गर्ने कि नगर्ने?’ भन्ने विषयमा मन्त्रालयले छलफल गरिरहेको छ । सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पूर्ण रुपमा पालना नहुँदा उपत्यकामा पछिल्ला केही दिनयता दैनिक १५ सयभन्दा बढी संक्रमित थपिन थालेका छन् । उपत्यकामा दिनप्रतिदिन संक्रमित बढ्न थालेसँगै संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि मन्त्रालयले विभिन्न विकल्पमा छलफल गरिरहेको र त्यसमध्येको एक विकल्प लकडाउन रहेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना नगर्दा उपत्यकामा कोरोना संक्रमण झनै बढ्ने र विभिन्न अस्पतालले बिरामीको चाप थेग्न नसक्ने अवस्था आएमा स्थिति भयावय बन्नेमा सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् ।
कोरोना संक्रमण नियन्त्रणको लागि लकडाउन प्रभावकारी माध्यम भए पनि स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल भने सकभर लकडाउन नगर्ने पक्षमा अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । लकडाउनका विषयमा सबै सरोकारवाला पक्ष तथा विज्ञहरुसँग छलफल गरेर मात्रै सरकारले आवश्यक निर्ण गर्ने मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । नेपालमा हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या २३ हजार पाँच सयभन्दा बढी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
तनहुँबासी दशैँमा घर फर्किँदा १४ दिन अनिवार्य क्‍वारेन्टाइनमा बस्‍नुपर्ने
तनहुँबाट बाहिरिएकाहरु दशैँमा घर आउँदा १४ दिनसम्म अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बस्नपर्ने भएको छ । जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको आज बसेको बैठकले कोभिड–१९को जोखिमलाई ध्यानमा राखेर यस्तो निर्णय गरेको हो । चाडपर्वमा देश तथा विदेशबाट धेरै सर्वसाधारण जिल्ला फर्किने हुँदा कोभिड–१९ को जोखिम बढ्ने भएकाले त्यस्ता व्यक्तिको वडास्तरसम्मै तथ्यांक राख्ने र अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ ।
त्यसका लागि स्थानीयस्तरमा गठन भएका अनुगमन समितिलाई थप सक्रिय र प्रभावकारी बनाउने निर्णय भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागर आचार्यले जानकारी दिए । बैठकले प्रत्येक स्थानीय तहमा एम्बुलेन्सको आवश्यकता महसुस गर्दै त्यसको व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेको छ । ब्यास नगरपालिका–५ कालीभञ्जन गण (ई) मा राखिएको जनज्योति ग्राम सेवाको एम्बुलेन्स सम्बन्धित संस्थालाई फिर्ता गर्ने निर्णय भएको प्रजिअ आचार्यले बताए । उनका अनुसार आइसोलेसनमा रहेका सङ्क्रमितको नेपाल सरकारको नीति वा अन्य कुनै कारणले भाइरस नेगेटिभ नआउँदै बहिर्गमन गर्दा घरपरिवारका सदस्यको रोहवरमा स्थानीय जनप्रतिनिधिको जिम्मा लगाएर मात्र बहिर्गमन गराउने निर्णय भएको छ ।